umshini wokugaya irayisi,umshini wokugaya irayisi uyathengiswa
1.Irayisi yokugaya nomshini wokugaya owenzelwe izindlu nemizana, izindawo zasemakhaya nezintaba.
2.Ukusetshenziswa kwamandla kancane, inqubo yokukhiqiza iDemo,isilinganiso esilinganiselwe selayisi. Mill paddy ibe ilayisi kanye bran ngokwehlukana. Futhi umshini we-grinder ungagaya ummbila,irayisi kuya kwimpuphu.
3.Usayizi omncane,isisindo esikhanyayo,kulula ukusebenza ngekhwalithi eqinile, Intengo yokuncintisana nesici esiyingqayizivele.
Imininingwane Yomkhiqizo womshini we-Rice mill kanye nomshini we-grinder ohlangene
Irayisi yokugaya nomshini we-grinder ,umshini owodwa onemisebenzi emibili ye-works.rice kanye negrisi yerayisi.
1.Umshini wama-rice mil usetshenziselwa kakhulu irayisi eligoqayo paddy libe ilayisi elimhlophe emndenini, ipulazi, isitshalo sokuhluza okusanhlamvu njll. Izinga lokubhoboza okungaphezulu kwe 95%.
2.Umshini weGrinder uwukusebenza ngokusebenza kwesivinini esikhulu, Ukushayisana kwezinto zokwakha nezinto zokwakha ufulawa, I-Powula ekhishwe ngesihlungo ukwenza i-powder ibuye ihlangabezane nezidingo zomsebenzisi.Ukuhlanganisa izinto ezikhethekile zochungechunge:irayisi,ukolweni,ummbila okhazimula irayisi, isikhumba se-granular, upelepele, izinongo, njll.
Izici zomshini welayisi nomshini we-grinder
1.Umshini wokugaya ama-rice kanye nomshini wokugaya ungasetshenziselwa izinhloso eziningi,Ingasetshenziselwa ukukhonkotha okusanhlamvu noma ukugaya okusanhlamvu okungahlangabezana nezidingo zokusebenzisa zomndeni zomqondo.
2.Ukushayela imoto eyodwa 2 amadivayisi wokonga izindleko,ukumisa amandla kuyinto elula, umshini welayisi nomshini we-grinder ungaqhutshwa ngemoto kagesi, futhi ingaqhutshwa yinjini kaphethiloli,injini yedizili.
3.Umshini wokugaya amalayisi ungalingana nosayizi ohlukile wesigaxa selayisi (ongakukhetha okungu-0.7mm, 1.0mm, 1.3mm), Ngakho-ke lokho kungenza izinto ezihlukile;Ubungako besikrini bokukhetha bomshini we-grinder umshini ngu-0-0-0.6mm.usayizi osuqediwe ungakhethwa yikhasimende.
4.Ifaniswe ne-othomathikhi yokuguqula ibhande lokudlulisa, isibambo sokushintsha singalungisa umshini welayisi nomshini we-grinder osebenzayo ,ingaqinisekisa ukuthi i-grinder ayisebenzi lapho kusebenza imishini yelayisi.or lapho ugaya izinto zokwakha ,isigayo selayisi ngeke sisebenze.
5.Umshini wokugaya irayisi nomshini we-grinder ngosayizi omncane, kulula ukuhambisa nokuhambisa, umgqomo welayisi wokugaya nedivaysi yokulungisa imitha, Sebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe ukufeza ukubukeka okuhle, kusebenza, imiphumela yokuhlanzeka,ezingavali.
6.Isihlalo somshini weGrinder sifakwe ngephedi ukuvikela ukuphuma kothuli, kufakwa ephaketheni lendwangu ukuvimba uthuli nokuqoqwa kwempuphu.
Amapharamitha obuchwepheshe wokugaya irayisi nomshini wokugaya
Amamilayisi erayisi 150 ~ 200
(r / imizuzu)
Ukulinganisa Okuphelele Okuphukile Okujwayelekile
ividiyo yomshini wokuxubha welayisi ohlangene nomshini we-grinder
Sithinte Ngama-Rice mill kanye nomshini we-grinder ohlangene